Zọ na-emeghe ọnụ ụzọ ụlọ nkwari akụ - Ntuziaka
Home » Itylọ Ọrụ Mmepe Ọbịa » Zọ na-emeghe ọnụ ụzọ ụlọ nkwari akụ - Ntuziaka
Andrew J Wood na-enyocha atụmatụ dị iche iche maka ndị ọbịa
Gbaa mbọ hụ na ị kpuchitere ihe niile ka ị dịrị njikere maka imeghe ụlọ nkwari akụ na-aga nke ọma
Ọ dị oke mkpa na ụlọ oriri na nkwari akụ na-eme ka mmefu ego ha sie ike maka ha
Nyochaa ngwọta teknụzụ ụlọ nkwari akụ gị iji mepụta ọnọdụ agile nke na-esetịpụ ọkwa dị elu nke nkà na ụzụ na-aga n'ihu n'ọdịnihu
Dika iberibe ìhè na-aputa na njem ndi njem na iji mee ka gi na hoteeli gi di nma karie ka ị meghee ma e nwere ọtụtụ ihe ị ga-atụle dị ka ahịa gburugburu ụwa ugbu a jiri nwayọ belata mgbochi njem. Gbaa mbọ hụ na ị kpuchie ihe niile ka ị dị njikere maka imeghe mmeghe nke ọma.
Dịka ịmalitere ịkwadebe maka mmefu ego nke afọ na-abịa, ọ dị mkpa na ụlọ oriri na nkwari akụ na-eme ka mmefu ego ha siere ha ike. N'ihe ịma aka ndị Covid-19 gosipụtara, ugbu a karịa oge ọ bụla ga-abụ oge iji nyochaa ngwọta teknụzụ ụlọ nkwari akụ gị iji mepụta gburugburu ebe obibi nke na-esetịpụ ọkwa dị elu nke nkà na ụzụ na-aga n'ihu n'ọdịnihu.
Enwetara m cherry ma chịkọta ndụmọdụ kachasị mma nke nwere ike igosi ndepụta ndepụta bara uru n'ụwa ọhụrụ anyị. Ebe ọ bụ na enweghị ndụmọdụ ndụmọdụ dị ntakịrị nye ndị ọbịa na ndị na-eme njem nlegharị anya, enwere m olileanya na afọ 40 + m dị ka ụlọ nkwari akụ nwere ike idozi ụfọdụ ọka wit na igbogbo ọka.
• Iji belata nchegbu nke ndị ọrụ na ndị ọbịa, a na-agba ndị ọzọ ọzụzụ nke ndị ọrụ chere ihu ihu. Na ụlọ nkwari akụ imeghe n'otu oge, ihe elebara anya kwesịrị ịdị na iche iche nke ụlọ nkwari akụ na onyinye, iji kwe ka ọdịiche dị n'etiti ụlọ nkwari akụ na-apụta site na mkpọchi. Mgbe ị na-eweghachi ntọala na ụkpụrụ arụmọrụ, mgbe emechiri - ele mmadụ anya n'ihu ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ - ndị mmekọ njem na ndị ahịa ha kwesịrị ijide n'aka na ha na-abanye ọrụ nchekwa na ntụkwasị obi nke nwere ụkpụrụ na-enye ego maka asọmpi.
• Gbaa mbọ hụ na ndị niile metụtara ya - dịka ụlọ akụ, ndị ọrụ na ndị na - ebubata ya - maara ma banyeghachi atụmatụ ahụ.
• Ebe nchekwa dị na SOP (Usoro Standardrụ Ọrụ Standardkpụrụ) yana ịkpachara anya na ebe dị n'elu ndepụta ndị ahịa gị. Ndị ọrụ nwere ike ịchọ inyocha ihe onwunwe gị tupu itinye ndị ahịa ha n'ime ụlọ gị. Ee, ha ga-achọ ịhụ ọtụtụ aka sanitisers, masks, mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ọdọ mmiri. Ọ dịkwa ha mkpa ịmara na a zụọla ndị ọrụ gị n'ihu na usoro ịdị ọcha dị mma.